China CS6712D Digital Potassium Ion Inzwa ifektri abakhiqizi | UChunye
Kulula ukuxhuma ku-PLC, i-DCS, amakhompyutha wokulawula izimboni, izilawuli zenhloso ejwayelekile, izinsimbi zokuqopha ezingenamaphepha noma izikrini zokuthinta namanye amadivayisi wesithathu.
I-potassium ion electrode ekhethiwe iyindlela ephumelelayo yokukala okuqukethwe kwe-potassium ion kusampula. Ama-electrode akhethiwe e-Potassium ion nawo asetshenziswa kaningi kuzinsimbi eziku-inthanethi, njengokuqapha okuqukethwe kwe-potassium ion online. , I-Potassium ion electrode ekhethiwe inezinzuzo zesilinganiso esilula, impendulo esheshayo nenembile. Ingasetshenziswa ngemitha ye-PH, imitha ye-ion kanye ne-inthanethi ye-potassium ion analyzer, futhi isetshenziswe futhi ku-electrolyte analyzer, naku-ion okhetha umtshina we-electrode we-flow injection analyzer.
Isicelo: Ukunqunywa kwe-ion ye-potassium ekwelapheni amanzi okuphakelwa kwama-boiler aphezulu anengcindezi ezitshalweni zamandla nezitshalo zamandla kagesi. Indlela ye-potassium ion ekhethiwe ye-electrode; indlela ye-potassium ion ekhethiwe ye-electrode yokunqunywa kwe-potassium ion emanzini amaminerali, amanzi okuphuza, amanzi angaphezulu namanzi olwandle; Indlela ye-potassium ion electrode ekhethiwe.Ukunqunywa kwe-ion ye-potassium etiyeni, uju, okuphakelayo, ubisi oluyimpuphu neminye imikhiqizo yezolimo; i-potassium ion indlela ekhethiwe ye-electrode yokunqunywa kwe-ion ye-potassium ematheni, i-serum, umchamo namanye amasampula webhayoloji; i-potassium ion indlela ekhethiwe ye-electrode yokunqunywa kokuqukethwe ezintweni ezibonakalayo ze-ceramic.
•I-CS6712D i-potassium ion sensor ngama-electrode akhethiwe e-membrane ion, asetshenziselwa ukuhlola i-potassium ion emanzini, angashesha, alula, anembile futhi abe nokonga;
•Idizayini isebenzisa isimiso se-single-chip solid ion ekhethiwe, ngokunemba okuphezulu kokulinganisa;
•Isixhumi esibonakalayo se-septage se-PTEE, okungelula ukuyivimba, anti-ukungcola Kufanelekile ukwelashwa kwamanzi angcolile embonini ye-semiconductor, i-photovoltaics, i-metallurgy, njll kanye nokuqapha komthombo wokungcola;
•Ikhwalithi eyodwa engenisiwe yekhwalithi ephezulu engenzeka, iphoyinti elinembile elingaba khona ngaphandle kokukhukhuleka;
Amandla / I-Outlet
I-9 ~ 36VDC / RS485 MODBUS
Indlela ye-Ion electrode
Ububanzi 30mm * ubude 160mm
Ukulinganiswa kwesampula, ukulinganiswa okujwayelekile kuketshezi
Ikhebula elijwayelekile le-10m noma linwebe liye ku-100m
Ukusebenza okujwayelekile, umfula, ichibi, amanzi okuphuza ukuvikelwa kwemvelo, njll.
Langaphambilini Uhlobo Lokucwiliswa ku-inthanethi Inzwa Yokuguquguquka
Olandelayo: Inzwa ye-CS6710D Digital Fluoride ion
Inzwa ye-Digital Nitrite RS485
Inzwa ye-CS6721D Digital Nitrite
CS6714D Digital Ammonium Nitrogen Ion Inzwa
Inzwa ye-CS6718D Digital Hardness (Ca Ion)
Inzwa Yokusebenza Kwenethiwekhi yeTitanium, Inzwa yokuqhuba ye-TDS, Inzwa Yokusebenza Kwe-Electromagnetic, Inzwa yeChlorophyll, Isizweli sokusebenza se-Quadrupole Graphite, Ph Inzwa electrode,